Phoe Tet Pu – Episote 1 (June 16/2021) – PVTV Myanmar
2021-06-16 at 12:41 PM
2021-06-16 at 12:44 PM
သမတမဖြစ် မသာဖြစ်မဲ့ကိန်းဆိုက်. နေ.
2021-06-16 at 1:23 PM
SuHtoo Sat says:
2021-06-16 at 1:30 PM
2021-06-16 at 1:37 PM
yessica moe says:
2021-06-16 at 1:38 PM
2021-06-16 at 2:04 PM
​နောက်ခံ တီးလုံးက မိုက်
theTruth man says:
2021-06-16 at 2:06 PM
မင်းအနေနဲ့ စစ်တပ်ကို ဝေဖန်တာ ငါ မပြောလိုဘူး ၊ ငါနဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး
မင်း ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ မင်းပြန်စဥ်းစားစမ်းပါ။
မင်းဟာ မီဒီယာသမား တစ်​ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေတာ
ဒီတော့ မီဒီယာ ကျင့်ဝတ်နဲ့ ညီအောင်ကျင့်ရမှာ မင်းရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားပဲ
မင်းပြောသွားတဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဥ်မှာ ၃လလောက် ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မဲ မသမာမှု ကိစ္စကို ကျော်ပစ်လိုက်တယ်၊
ဒါဟာ မီဒီယာတစ်ယောက်ရဲ့ ကျင့်ဝတ်ဖောက်ပြန်ပြီး ဝါဒမှိုင်းတိုက်တာ ဖြစ်သွားပြီ၊ ပြည်သူကို အသိမှား အမြင်မှား ပေးပြီး ဒေါသလျောက် တုန့်ပြန်အောင် လှုံ့ဆော်တာ ဖြစ်နေပြီ။
အယုံလွယ်တဲ့ ငါတို့ပြည်သူကို ပညာမတတ်၊ ကျပ်မပြည့်တဲ့ ငတုံး ငအတွေလို့ သတ်မှတ်ပြီး အနောက်မီဒီယာတွေ ၊ FB လော်ဘီတွေက ဝါဒမှိုင်း အပြည့်တိုက်ခဲ့တာ ဘာဖြစ်သွားလဲ? နိုင်ငံရေးအကြောင်း ဂဃနဏမသိတဲ့ ပြည်သူတွေ ၊ ကျောင်း စာအုပ်ဘေးချပြီး လမ်းပေါ်တက်ခဲ့တဲ့ လူငယ်လေးတွေ အသက်တွေ၊ ဘဝတွေ ပေးလိုက်ရတယ်၊ အကြမ်းဖက် အဆင့်နဲ့ တုန့်ပြန်တဲ့ အခြေအနေထိ ရောက်ခဲ့ရပြီ ၊ ဒါတွေက အလင်းရောင်ပြရမယ့် အစား ကိုယ့်အကြိုက်အတွက် ဝါဒမှိုင်းတိုက်ခဲ့တဲ့ မီဒီယာတွေရဲ့
ဒီအခြေအနေမှာ မင်းတို့လို မြန်မာလူမျိုးက မြန်မာတွေ ကျွေးတဲ့ ထမင်းစားပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေ ဘဝပျက်အောင် ဝါဒမှိုင်း တိုက်နေတာ အောက်တန်းကျလွန်းတယ်
မီဒီယာ ကျင့်ဝတ် နဲ့ မီဒီယာ တစ်ယောက်
လူ့ကျင့်ဝတ် နဲ့ ညီတဲ့ လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့… ပြည်သူကို အကျိုးပြုဖို့ ကြိုးစားပါ၊ အလင်းပြပါ၊ Propaganda တွေကို ရှောင်ပါ၊ အမှန်တရားကို ကျော်မသွားပါနဲ့ ၊ မင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ယုံကြည်မှုနဲ့ ဆန့်ကျင်နေရင်တောင် အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ရမှာ မင်းတာဝန်ပါ။
ယုံကြည်မှုတို့ အကြိုက်တို့ဆိုတာ အင်အားကြီးကောင်းကြီးလိမ့်မယ်၊ သို့သော် အမှန်တရားရဲ့ အကြမ်းခံမှု ၊ တာရှည်ခံမှုကို ကျော်လို့မရဘူး ။
ကိုယ့်ယုံကြည်မှုကို မဲဆွယ်ဖို့ မီဒီယာ လုပ်စားတယ်ဆိုရင်တော့… မင်းဟာ မီဒီယာ သစ္စာဖောက် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်
မင်းတို့ ငါတို့အတွက် ခါးချင် ခါးလိမ့်မယ်
သို့သော် ဒါဟာ အမှန်တရားဆိုရင် အရှိအတိုင်းသာ တင်ပြပေးပါ။ သတင်းအတွက် ခံစားချက် တစ်စုံတရာရှိနိုင်ပေမယ့်…
မင်းရဲ့ Professional ပီသမှုအတွက်
John Naing Aung says:
2021-06-16 at 2:07 PM
ထိထိနဲ့မိမိပဲ GGပါ ✊✊✊
2021-06-16 at 2:09 PM
2021-06-16 at 2:28 PM
Propaganda ဟာ သိပ်ကြောက်စရာ ကောင်းတယ်၊ ကူးစက်သူ များလာလေလေ နောက်လူတွေကို ကူးစက်ဖို့ အင်အားကြီးလာလေလေ ဖြစ်တတ်တဲ့… အဝိဇ္ဇာတရားပဲ
မီဒီယာသမားတွေ ကိုယ်တိုင်ရော ဝါဒမှိုင်း လွတ်တယ်ထင်နေလား?
မီဒီယာ ပညာ စ သင်ကတည်းက ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ နဲ့ လူခွင့်အရေးဘက်က ရပ်တည်ရမယ် ဆိုတာသည်ပင်… Propaganda Technique တစ်ခုပဲ ။
အဲ့ဒီ စကားနှစ်ခုကို သုံးလိုက်တာနဲ့ မင်းဟာ အနောက်အုပ်စုရဲ့ ရန်သူတွေကို အလိုလို မုန်းမိရက်သား ဖြစ်သွားပြီ ။ ဒီမိုကရေစီ စံချိန်နဲ့ ညီတဲ့ အိန္ဒိယ နဲ့ ကွန်မြူနစ် တရုတ်… ဘယ်နိုင်ငံသားက Quality of Life ပိုပြည့်သွားခဲ့ပြီလဲ? ဒီဥပမာက သက်သေ ဘယ်လို ခိုင်မာပေမယ့် မင်းအနေနဲ့ ငြင်းချင်နေအုန်းမှာပဲ ၊ ဒါ့ကြောင့်လည်း ဝါဒမှိုင်းလို့ ခေါ်တာပေါ့။
မင်းတို့ မီဒီယာတွေ အနောက်အုပ်စုရဲ့ ဝါဒမှိုင်း ဘယ်လောက်မိနေပြီလဲဆိုတာ စဥ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့ ။
ငါက ဘယ်ဘက်ကမှ မဟုတ်ဘူး။ စာဖတ်တဲ့ စာတတ်တဲ့ နိုင်ငံကို ချစ်တဲ့ ပြည်သူ စစ်စစ် တစ်ယောက်ပဲ။
2021-06-16 at 2:53 PM
၂၀၁၀ မှာ ဒီမိုကရေစီ ရတယ်။
၂၀၁၁ မှာ ဒေါ်စု လွတ်တယ်။
ဒီမိုကရေစီရလို့ ဒေါ်စု လွတ်တာ၊
၂၀၀၈ ခြေဥ ကိစ္စ ၊ စစ်တပ် အစိတ်သား ကိစ္စလား? အင်ဒိုနီးရှားလည်း ဒီလို အဆင့်ဆင့် သွားခဲ့တာပဲ ။ ပြောရရင် အင်ဒိုရဲ့ နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဥ်ကို ထပ်တူ အတုခိုးခဲ့တာ။ တို့ ASEAN နဲ့ အရှေ့အာရှ နိုင်ငံတွေကို လေ့လာကြည့် ၊ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်း အပြည့်နဲ့ သွားနေတဲ့ နိုင်ငံ ဘယ်နှစ်ခု ရှိလဲ? အပြည့်အဝ သွားနေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်လို အားသာချက်တွေ ရှိလဲ? ဒါတောင် Sideeffect တွေ ပေါ်လာနေပြီ ။ ကိုလိုနီ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အပြင်
Divide and Conquer Strategy ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကြောင့် ကွဲလွယ် ပြဲလွယ်တဲ့ သဘောထား ၊ အသိပညာ နည်းပါးမှု ၊ ဒီမိုနဲ့ အရမ်းဂွင်မကျတဲ့ အရှေ့အာရှသားတွေရဲ့ တချို့ Culture တွေ ၊ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းအမြင့်ကြီးနောက်မှာ ကပ်ပါလာမယ့် အခွင်အရေးသမားတွေ၊ ဒါတွေကို နည်းလမ်းတကျ ခုခံနိုင်စွမ်းမရှိသေးတဲ့ သန်း ၅၀ ကျော်ရဲ့ ဒီမို ရင့်ကျက်မှု… စတဲ့ ကိစ္စတွေ နားလည်ဖို့…
Political Science ကို လေ့လာကြည့်လိုက်ပါဦး။ ဒါတွေ နားမလည်ဘဲ ဒီမိုဇွတ်ဖြစ်ချင်နေရင်တော့… သေချာတယ် မင်းမှာမိနေတဲ့ Propaganda Virus Loading က တော်တော်များနေပြီ ။
မင်းတို့ မီဒီယာတွေက ကျင့်ဝတ်ဖောက်ပြီး အမုန်းနဲ့ ဆန့်ကျင် / အကြိုက် နဲ့ ထောက်ခံပံ့ပိုးတာဟာ ဆန္ဒာကတိလိုက်စားပြီး နိုင်ငံကို မှိုင်းသွင်းခဲ့တာပဲ။ ဒါ့ကြောင့် တို့ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့…
ဒီ 2021 အရေးအခင်းကို ငါတို့ မေ့မှာ မဟုတ်ဘူး။
Cho Wai . says:
2021-06-16 at 3:25 PM
Going downhill to……
Thank you. Nice narrative..
တပ္ပ်က္လုလု ဖိုးတက္လု 😂😂😂
2021-06-16 at 10:12 PM
Panchit Thu says:
2021-06-17 at 12:19 PM
2021-06-17 at 9:09 PM
ဆရာလဂွန်းအိမ်ရေးဆွဲထားတဲ့ ကာတွန်းကို ခံစားပြီး တပ်မတော်သားတွေရဲ့ သစ္စာဓိဌာန်တွေအ…